Siyaasa Itoophiyaa: ABOn lamatti qoodamaa jiraa? – Kichuu
HomeAfaan OromooNewsSiyaasa Itoophiyaa: ABOn lamatti qoodamaa jiraa?
Torbanoota darban keessa walgahii Hayyuu Dureen dhaabichaa hin beekne jedhame waajira olaanaa dhaabichaatti gaggeefamee ture.
(bbcafaanoromoo)–Sana hordofees miidyaalee hawaasaarratti ABOn Hayyu Duree dhaabichaa Obbo Daawuud Ibsaa aangoorraa fonqolche jedhamee gabaafamee ture.
Obbo Daawudiifi Itti-aanaan isaanii garuu guyyoota booda walarganii mariyachuuf walhubannaan akka hojjechaa jiran ibsanii turan.
Haata’u malee, Wixata darbes Itti-aanaa Hayyu Duree ABO Obbo Araarsoo Biqilaa bakka jiranitti ibsi miidiyaaf dhaabichi kenne Hayyu Dureen bakka hin jirrettidha.
Gaaffi dhaabichi bakka lamatti qoodameera jedhuuf dubbi himaan ABO Obbo Toleeraa Adabaa deebii kennaniin ‘‘olola miidiyaa hawaasaati jaarmiyaan lamatti qoodame hin jiru,’’ jedhan.
Ibsi miidiyaalee waamuun kennaniis seeruma dhaabichaa eegee Hayyuu Duree itti-aanaan irraa qoodafudhatedha koree hojii-raawwachiiftuun hundi kan beeku akka ta’e dubbatan.
‘‘Fonqolcha godhanii, uummata gurguratanii, gananii kan jedhu waanuma hin jirretu afarfama,’’ jechuunis dubbatan Obbo Toleeraan.
“Tikni mootummaa nageenya keef waan yaaddoofneef,’’ jechuun manaa akka hin bane isaan ittisuufi guyyoota muraasa darban garuu qaamoleen nageenyaa mootummaa mana isaaniirraa siiquu Obbo Daawud Ibsaa BBCtti himaniiru.
Dhaabni isaanii lamitti bahaa jira jedhamee isa haasa’amaa jiruurratti kan dubbatan Obbo Daawud, “ammatti kanatu ta’aa jira jechuu baadhus biyya kana keessatti wanti hin ta’u jedhan hin jiruu,’’ jedhan.
Dhaabota siyaasaa akka Qinijjitiifi KFO keessatti kanaan dura mootummaan harka galafatee akkamiin akka diiges yaadataniiru.
Walumaagalatti garuu wanni ta’aa jiru waan gaarii hin taane ta’uu dubbachuun ni danda’amaa jedhan.
”Akki manaa hin bane godhamne, telefoonni nurraa fuudhame, hooggansaafi miseensa waliin hin qunnamne godhame garuu dhaabicha fottoqsuutti jiru jechuuf kan nama shakkisiisudha jedhaniiru.
Mootummaan erga dhaabichi biyyattii deebi’ee eegalee irratti qiyyaafatee akka jiru himan.
“Dhaabni biyya bulchu maallaqaanis, tikaaniis, doorsisaaniis caccabsee nama itti baafatuun aadaa biyya kanaatii,’’ jedhan.
Ibsa Wiixata kenname ilaalchisees Obbo Daawud quba kan hin qabne ta’uu BBCtti himaniiru.
Sagaleen Bilisummaa Oromoo guyyaa Dilbataa Obbo Daawudiifi Itti-Aanaan isaaniis gaafatamanii quba kan hin qabne ta’uus Obbo Araarsoon bakka ibsi kennametti garuu argamaniiru.
Ibsi isaan kennan kun akka ittiin bulmaata dhaabichaatti beekamtii isaanii malee waan raawwatameef “kan seeraa alaatis” jedhan Obbo Daawuud.
ABOn haalli nageenyaa gaariin yoo jiraate ji’a kana keessa Kora Sabaa waamuuf karoora qabaachuu Obbo Daawuud ibsaniiru.
‘Uummatni ‘afaan-fajjii keessa seenee waan jiruuf’ ibsi barbaachise’
Haala Dhaabni ABO yeroo ammaa keessa jiru, akkasumas uummatnis ”afaan-fajjii keessa seenee waan jiruuf” miidiyaaleef ibsa kennuun akka barbaachise dubbii himaan dhaabichaa Obbo Toleeraan BBCtti himan.
Itti-aanaa Hayyu Duree ABO kan ta’an Obbo Araarsoo Biqilaa, Obbo Toleeraa Adabaafi Obbo Qajeelaa Mardaasaa Wiixata sa’aa booda Hoteel Hiltanitti bakka Hayyuu Dureen hin jirretti miidiyaaleef ibsa kennaniiru.
Ibsa isaanii kanaanis ABOn ejjennoo qabsoo karaa nagaan (hidhannoo maleessaan) gaggeessuurratti qabu ifa gachuu, akkasumas haala yeroo ammaa Oromiyaa keessatti dhalate wajjiin walqabatees mariin akka gaggeefamu waamichi dhiyaateera.
‘‘Karaa jarreen jabina uummata Oromoo hin barbaanneen, kabajamuun mirga namoomaa Oromoo dantaa keenya tuqa jedhaniin uummatni keenya afaan-fajjii keessa jira,’’ kan jedhan Obbo Toleeraan haala kanatu amma ibsa akka kenninu sababa ta’e jedhan.
Jaarmiyoonni Oromoo walitti dhufanii tokkummaa isaanii akka cimsaniif korri jaarmiyoota siyaasaa Oromoofi miseensota dhaabichaarraa fagaatanii jiran, kaaniis walitti fidu akka gaggeefamu ibsa dhaabichi har’a kenne irratti gaafatameera.
Dhimmi Oromoo haala adda addaarraa yaaddessaa ta’aa waan dhufeef, dhimma kanarratti marii bal’aan dhaabota siyaasaan qofa osoo hin taane abbootiin biyyaa, abbootiin amantaa, Abbootiin Gadaa, murni hawaasaa Oromoo garaagaraa, miseensonnifi hoogganoonni ABO duraanii hundi irratti argaman akka gaggeefamu gaafanne,’’ jedhan Obbo Toleeraan.
‘‘Haalli uummata Oromoo maal fakkaata kan jedhurratti hubannoo tokkorra akka gahamuu barbaannas,’’ jedhan Obbo Toleeraan BBCf yaada kennaniin.
Waamichi miseensota dhaabicharraa sababa garaagaraatiin fagaataniif godhame kan alanaa kun haaraa miti isuma kana duraa bal’isnee miseensonni kun dhaaba isaaniitti deebi’anii saba isaanii akka tajaajilan gaafanne jedhaniiru.
Galmi marii ABO ibsa isaa kanaan gaafatee ”Tokkummaa Oromoo Itichuu” akka ta’es Obbo Toleeraan dabalanii himaniiru.
Jaarmiyaa garaagaraa jalatti socho’uu caalaa tokkoomanii socho’uutu wayyoomina qabas jedhaniiru.
Haala Hayyuu Dureen dhaabichaa keessa jiran gaafatamanii amma hojii idilee isaaniirra akka hin jirre qofa kan ibsan Obbo Toleeraan, yeroodhaaf dhaabichi Hayyuu Duree Itti-aanaan gaggeefamaa akka jiru dubbatan.
Ajaa’iboo Hayiluu Huursii Kaasi!New Oromo Music 2020. official Video. #Gadaa Digital Studio.
Caalii Hinsarmuu and Utubaa Lammii s